Hawada Aqalka cad ee maraykanka oo la xidhay saakay, kadib markii lagu arkay diyaarad aan ruqsad u haysan. – Samawadenews
Hawada Aqalka cad ee maraykanka oo la xidhay saakay, kadib markii lagu arkay diyaarad aan ruqsad u haysan.
Washington DC. Booliska Guriga cad ee maraykanka ayaa waxay sheegeen in waktiga saacada Washington 9:00 subaxnimo ee maanta lagu arkay hawada agagaarka guriga cad ee maraykanka looga taliyo Washington DC. Diyaarad, diyaaradaas oo ku xadgudubtay hawada guriga cad oo aan la ogolayn in Diyaarado kormaraan.
Qolyaha hawada kontaroola ama haga ee loo yaqaan afka qalaad Air Traffic Control, ayaa sheegay in xidhiidhka diyaarada ay la lahaayeen uu ka go’ay, waxa kale halkaasi lagu arkay, hawadana duulayey diyaaradaha dagaalka maraykanka si ay u ilaaliyaan guriga cad.
Booliska iyo sirdoonka maraykanka ayaa xidhay jidadka iyo nawaaxiga u dhow guriga cad, waxana dib loo furay kadib markii ay xidhnayd muddo 30 daqiiqo ah. Ilaa hadda lama oga diyaaradaasi waxay ahayd, maadaama aanay ruqsad u haysan, war intaa ka dhaafsiisana sirdoonka kama bixin.
Fanaanada Hodan Cabdiraxmaan oo lagu soo dhaweeyey magaalda Hargeysa. Daawo
Jubbaland oo war ka soo saartay Xaalada Wasiir Cabdirashiid Janan
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlay sababta loo xidhay Xafiiska Universal TV.
Hargeysa. Wasiirka Warfaafinta Somaliland Saleebaan Koore oo sheegay sababta loo xidhay Xafiiska Universal TV oo ah inay si cad u diideen inay baahiyaan Khudbada Madaxaweynaha S.land ee xuska 26ka Juun, … Read More
[Al-Ghashiyah (the Overwhelming): 18]